Soomaali badan oo kunool dalka Mareykanka oo maanta Wadnaha farta ku haya”hal arin darteed” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Soomaali badan oo kunool dalka Mareykanka oo maanta Wadnaha farta ku haya”hal...
Soomaali badan oo kunool dalka Mareykanka ayaa wadnaha farta ku haya, waxa ayna Soomaalidan oo dalka Mareykanka ka heestay sharciga magangalayada ee ku meel gaarka ka cabsi qabaan in aan loo cusboonaysiin sharcigaasi oo ka dhacay.
In ka badan 500-qof oo Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in maanta ka war sugayaan in sharcigan loo cusbooneesiiyo ama loo diido , waxaana dadka Soomaaliyeed yihiin kuwa aad u walaacsan oo isha ku haya sida uu xaalkoodu ku dambeyn doono
Dadkan Soomaaliyeed ee laga yaabo in sharciga loo cusbooneysiin waxaa ku jira kuwo Maraykanka ku noolaa in kabadan 20 sano oo shaqaysta, canshuur bixiya isla markaasna qoysas ku samaystay, waligoodna aan dambi galin.
Senetaro Mareykan ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaalo dadkan loogu raadinayo in sharciga loo cusbooneysiiyo, waxa ayna Senetaradan Warqad codsi ah u direen Maamulka Madaxweyne Trump.
Warqada Senetaradan u direen Madaxweyne Trump waxa ay uga codsadeen in dadka Soomaalida ah loo kordhiyo mudada sharcigooda, iyada oo la eegayo xuquuqda bini’aadamka iyo duruufaha ka jira waddanka Soomaaliya.
Dadkan Soomaaliyeed ayaa hadii loo diido in sharciga loo cusbooneysiiyo waxaa suurto gal ah in laga soo musaafuriyo dalka Mareykanka laguna soo celiyo dalkooda hooyo ee Soomaaliya.
Previous articleHalkee ayuu ku danbeeyay wadahadalkii laga dhexwaday DFS & Imaaraadka?
Next articleDHAGEYSO: Qisadda Hooyo Maraykan ah oo Caruur u Dhashay Wiil Soomaali ah oo Laga Musaafuriyay
Madaxweyne Lafta Gareen oo ka walaacsan ciidamo Amisom ka tegaayo….
DEG DEG SAWIRO: Weerar isqarxin ah oo lagu dilay siyaasi Mucaarad ah iyo Dad kale…
Shabaab oo war kasoo saaray qaraxii iyo weerarkii Awdheegle iyo sida ay u fuliyeen
“DFS Si degdeg ah waa in ay Ciidamada uga soo qaadaa Gobolka Gedo” Senator Faroole.
Kim Jong-un oo Shiinaha gaaray..
Gaas oo qorsheynaya in uu qodobo dastuuri ah bedelo isagoo damacsan qorshe
DAAWO: Aas Qaran oo Loosameeyay Marxuum Maxmed Qanyare Afrax
Farmaajo vs Xasan Sheekh: Gar miyaa doodaha Xasan?